Aịzaya 20 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ihe na-egosi ihe ga-eme ndị Ijipt na ndị Etiopia (1-6)
20 N’afọ Sagọn eze Asiria ziri Tatan* ka ọ gaa lụso ndị Ashdọd agha,+ Tatan gara merie ha.+ 2 N’oge ahụ, Jehova gwara Aịzaya+ nwa Emọz, sị: “Gaa tọpụ ákwà iru uju i kere n’úkwù, yipụkwa akpụkpọ ụkwụ i yi n’ụkwụ.” Aịzaya mekwara otú ahụ, gbara ahụ́ ọtọ* na ụkwụ efu na-agagharị. 3 Jehova kwuziri, sị: “Ahụ́ ọtọ a na ụkwụ efu a Aịzaya ohu m gba na-agagharị ruo afọ atọ bụ ihe na-egosi ihe ga-eme+ Ijipt+ na Etiopia.+ 4 Eze Asiria ga-eduru ndị Ijipt+ na ndị Etiopia a dọọrọ n’agha laa, ma ụmụaka ma ndị agadi. Ha ga-agbacha ụkwụ efu, gbarakwa ahụ́ ọtọ, a na-ahụ ikè ha anya. N’eziokwu, a ga-emenye ndị Ijipt ihere.* 5 Ndị tụkwasịrị Etiopia obi, jirikwa Ijipt na-eme ọnụ,* ga na-atụ ụjọ, ihere ana-emekwa ha. 6 N’oge ahụ, ndị bi n’obodo a dị n’akụkụ osimiri ga-asị, ‘Legodị ihe mere ndị anyị tụkwasịrị obi, ndị anyị gbakwuuru ka ha nyere anyị aka ma napụta anyị n’aka eze Asiria. Ọ̀ bụzi anyịnwa ka aka na-agaghị akpa?’”
^ Ma ọ bụ “ọchịagha ya.”
^ Ya bụ, “e nweghị ezigbo ihe o yi.”
^ Na Hibru, “a ga-agba Ijipt ọtọ.”
^ Ma ọ bụ “na-ajakwa Ijipt mma maka otú o si maa mma.”